LAASCAANOOD(P-TIMES)- Askari ka tirsanaa ciidamada Booliska ee maamulka Somaliland ayaa lagu soo waramayaa in saacadihii lasoo dhaafay toogasho lagu dilay xili uu ku sugnaa duleedka magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.
Wararku waxa ay sheegayaan in kooxo ku hubaysan Baastoolado ay si gaadma ku dhaawaceen askarigaasi oo markii dambe u geeriyooday dhaawacii soo gaadhay.
Sidoo kale waxa ay wararku intaasi kusii darayaan in ragii ka dambeeyey falkaasi ay goobtaasi isaga baxsadeen isla markaasna aan si dhab ah loo ogeyn ilaa iyo hada sababta rasmiga ah ee ka dambaysa dilka loo gaystay askarigaasi.
Dhinaca kale saraakiisha Somaliland iyo maamulka magaalada Boorama kama hadlin dhacdadan, basle waxaa goobta gaadhay ciidamo ka tirsan kuwa Booliska kuwaas oo baadi goobayo gacan ku dhiiglayaashii dilkaasi ka dambeeyey.
Magaalada Boorama ayaa ah caasimada Caasimada labaad ee Somaliland, waxaana inta badan deegaanada Somaliland ka jira jabhado hubaysan oo dagaal adag kula jira maamulka Somaliland, kuwaas oo weeraro ku qaada inta badan saldhigyada ciidamada iyo xarumo kala duwan.